Isibani Sokukhanyisa, Ama-Edison Bulbs, Ukukhanya Kwezintambo - Omita Lightig
Ucingo: +86 18825896865
Amaphrojekthi & Izindaba
Vumela Umsebenzi Wethu Nenzuzo Yokukhanyisa kube ngeyakho.
IBusiness Base kuTrust, iTrust Base ku-Acquaintance.
I-Omita Lightig ene-Registered ithole ama-RMB angama-20million atholakala ngonyaka ka-2009. Njengomklami ovelele, umkhiqizi kanye nomthumeli kwamanye amazwe we-fixtur yamalambu okuhlobisa kanye nama-Edison bulbs, imikhiqizo yethu kanye nensizakalo yethu ivunyelwe yikhasimende lonke. Sinezakhiwo ezimbili zefektri ezitholakala eDongguan City nge-workshap ye-6000M2 Factory, i-2000M2 warehourse ne-400M2 Showroom. Siphinde sibe neqembu lobungcweti kusuka ekuklameni, ekukhiqizeni nasekulawuleni i-QC, kanye neqembu lokumaketha nokuthengisa. Imikhiqizo yethu kanye nensizakalo yethu iye yanabela emazweni angaphezu kwama-27, i-Europea ne-USA njengeMakethe eNkulu, kepha futhi sinamabhizinisi kulawo mazwe asathuthuka kakhulu kubandakanya iBrazil, iChile neNingizimu Afrika, iNigeria, iMalaysia. Iningi lemikhiqizo yethu liqinisekisiwe nge-CE Rohs, futhi nakanjani line-UL ne-SAA.
Ukukhanya Ngokwezifiso Nezindaba
Thola ugqozi kokunye esikukhombisa lapha
Esintantayo elengayo crystal isibani-Fr ...
I-algorithm isichasiso senkondlo yemathematics yemvelo. ukwakheka kokukhanyisa kukaToan nguyen, kuyisixuku sezimbulunga ezibonakala zintanta esikhaleni njengomhlambi wezinyoni, noma ishawa semvula efriziwe. isikimu sinikeza izingoma ezingapheli lapho izibani eziyindilinga zingamiswa khona d ...
Ukuthuthukiswa Pendant isibani S14s an ...
Ekuqaleni, ama-S14 (izikhonkwane ezimbili), ne-S14d (iphini elilodwa) ukwakheka kwezibuko ezithile ezinkulu. Imvamisa, kune-300mm, 500mm, ne-1000mm yama-S14 (izikhonkwane ezimbili), nesibani somugqa se-S14d (iphini elilodwa), futhi zonke zingaba yinguqulo ecacile nenguqulo ye-opal. Lapha ngibhala imigwaqo yethu ne-workshop yethu ...
Buyela ku-bulb pu yokuqala ...
Ngo-1809, umsunguli we-Englisg uHumphry Davy wadala isibani sokuqala sikagesi. Wayenezinduku ezixhunywe ngamalahle, uhlobo lwe-chemical element carbon, ebhetri enezintambo ezimbili. Yize ukukhanya kungathathanga isikhathi eside, kukhombisile ukuthi ezinye izinto zishise kakhulu lapho zikhanya lapho ugesi u ...
Ukukhanya kwe-UV kusebenza kanjani
Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo ake ubone ukuthi yini i-UV Lighting. Okokuqala, ake sibuyekeze umqondo we-UV. I-UV, noma i-ultraviolet, noma i-ultraviolet, ingamagagasi kagesi anebanga eliphakathi kuka-10nm no-400nm. I-UV yama-wave band ehlukene ingahlukaniswa nge-UVA, UVB ne-UVC. I-UVA: ubude bamandla bukhona ...
Ukukhanyisa ngokwezifiso matte white and ...
Endlini, esakhiweni, singabona umbala omhlophe noma kuphi, udonga olumhlophe, iphansi lemabula elimhlophe, insika emhlophe. Kodwa-ke, umhlophe ungahluka, wehluke ekujuleni kombala, omhlophe omsulwa, omhlophe qwa, omhlophe omhlophe, omhlophe obushelelezi. Namuhla, sizoxoxa ngokuthi kungani i-matte white ikhethwa ngabaqambi ....
Ngabe ufuna ukwanda kabanzi ngathi noma ngemikhiqizo yethu？